ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိ
Posted by နွယ်ပင် on Jan 27, 2011 in News | 15 comments
mmdailynews.com မှကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
ဆိုးရွားတဲ့ ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ ချွေးသိပ်တာလို့ ထင်တယ်။ နေရာင်ခြည်ဟာ မြေပြင်နဲ့ ဝေးကွာလေ အပူချိန်လျော့လေပဲ။ ဒါကြောင့် မြေပြင်ပေါ်ကို ရောက်ရှိလာမဲ့အလင်းတန်းတွေဟာ အပူချိန်ကို သေချာပေါက်ဖြစ်ပေါ်စေမှာပဲ။ ကမ္ဘာဟာ နေ့ ည အလှည့်ကြဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ သာ အပူအအေးချိန်ကို ချိန်ခွင်ညှိပေးထားတာပါ။ ညဖြစ်ပေါ်ရမဲ့ အခြမ်းမှာ နေ့ ဖြစ်ပေါ်ပြီး နေ့ ဖြစ်ပေါ်ဆဲ အခြမ်းမှာ ဆက်တိုက် နေ့ ချည်းပဲ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင် အပူချိန် အလွန် အမင်းမြင့်တက်လာမှာပါ။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဟာ အများကြီးပါ။ အပူချိန်လွန်ကဲမှု အမှတ်ဟာ လူတွေခံနိုင်တဲ့ အမှတ်ထက် ပိုလာရင် သေကုန်ကြမှာပါ။ ရာသီဥတု အကြီးအကြယ် ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေ ရက်တိုတိုအတွင်း ၀င်ရောက်လာမှာပါ။ အပူချိန်မှာ ပေါက်ဖွားတဲ့ ရောဂါပိုး ပေါင်းစုံ ပျံ့ နှံ့ လာမှာပါ။ ရေထုကို ထိမ်းထားတဲ့ ရေခဲတွေ အရည်ပျော်လာမှာပါ။ အလင်းတန်းလို့ ဆိုထားပေမဲ့ ကမ္ဘာ့လေထုနဲ့မြေပြင်နဲ့ ထိတွေ့ သွားရင် အပူ အဖြစ် ပုံဖော်မှာဖြစ်တယ်။ ပညာရှင် မဟုတ်လို့ဒီလောက်ပဲ မန်းနိုင်ပါတယ်။
တခုခု ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် ကြိုတင် ကြေငြာ မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ အလန့်တကြားနဲ့ ဖြစ်ကုန်ရင် ပိုဆိုးမှာမို့ပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ် လို့ကလဲရဘူးလေ။ ဒီတော့ ဘိုးတော် ဆရာသခင် များပြော တဲ့ အစီအရင် တွေပဲ လုပ်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ပြောလိုက်မယ်.. နီးလားရင် အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာ၊ ရေခဲသေတ္တာတွေ ဈေးတက်လိမ့်မယ်၊ ကြိုဝယ်ထား။
အခုကိုယ်လူဖြစ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာ 88လိုမျိုး၊ ဆူနာမီလိုမျိုး၊ နာဂစ်လိုမျိုး၊ အပူလိုင်းဖြတ်တာအအေးလိုင်းဖြတ်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲ သေကံမရောက်သက်မပျောက်လို့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်ရရှိခဲ့ပြီးပြီပဲ ဒီလိုပဲပေါ့ အခုကြယ်တာရာပေါက်ကွဲမယ်ဆိုတော့လဲ ကိုယ်တွေအသက်ကပြင်းတယ်ဆိုရင် မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတို့တွေထပ်ရရှိဦးမှာပဲလေ သတ္တ၀ါတစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့ညီမလေးရယ် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော်
ဟမငေး–ဂလိုဖစ်ရင်–AM/PM–ကြည့်ပီး အလုပ်လုပ်ချိန်..အိပ်စက်အနားယူချိန် ခွဲခြားရတော့ပေါ့–
ဒိုင်နိုဆောတွေကမ္ဘာအုပ်ချုပ်တော့ နှစ်သန်း၁၀၀ အသာလေးနေနိုင်သွားတယ်..။
နောက်တော့ .. ဥက္ကာပျံဝင်ဆောင့်ပြီး အကုန်သေတာပဲ..။
လူကျတော့ .. အီဂျစ်ပရိမစ်အစောဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တာကနေ … ထည့်တွက်ရင်.. နှစ် ၅၀၀၀ကျော်..လွန်ရော..၆ထောင်ပေါ့..။
လုပ်တတ်ကိုင်တတ်နဲ့.. ကမ္ဘာမှာ တခြားသတ္တ၀ါတွေထက်မြတ်ပါတယ်..။ တတ်ပါတယ်ဆိုပြီး သတ်စားဗိုလ်ကျလာကြတာ..။
အဲဒါ..အရှိန်လွန်ပြီး ..ကိုယ့်ကမ္ဘာကိုယ်..လေအားဖြင့်..အဲ..အဲ..အင်တာနက်အာဖြင့်.. မျိုးစုံကို ..ဖျက်နေတတ်ပြန်ေ၇ာ..။
ဟောလိဝုဒ်က လုပ်စားဖို့ .. အကြံအဖန်လုပ်တာကို… အဟုတ်မှတ်နေသူ တော်တော်များတာပဲ..။
အခု နေ၂စင်းလည်း ..မယုံဘုးဗျို့ ..။ ၂၀၁၂ မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကို ပိုမယုံတာ..။
ဒါပေမဲ့..ရွာသားတွေကတော့ .. အုပ်စုဖွဲ့ ..
အရပ်ထဲ..ယုံပါတယ်ဆိုပြီး .. . ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှာ ကမ္ဘာကြီးပါပျက်တော့မှာဆိုပြီး ..နတ်ပြည်မှာ ..အလွှာလိုက်..နေရာကြိုရောင်းစားကြပေါ့..။ နိမိတ်ပေးတာက.. ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့.. အဖေ..ဘိုးတော်ဦးမင်းစင်္ကြာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့..။ မြေပုံဈေး..(မဆောက်ခင်ဈေး) ဆိုတော့ .. ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တောင်း..။
နတ်သမီးပါ..အပိုလိုချင်ရင်.. နတ်သမီးသယောက်.. ဒေါ်လာနဲ့ ၁၀၀ကောက်ပေါ့..။
ဒီငွေတွေက .. ဧ၀ရတ်တောင်ရဲ့ န၀မမြောက်တောင်စွန်းမှာ..၇ှိတဲ့ ရေခဲလှိုင်ဂူအ၀င်ဝမှာထားတဲ့.. ဘီလူး၂ကောင်အတွက်အစီအရင် အစီအရင်လုပ်ဖို့ . တ၀က်ဖယ်ပြီး..ကျန်တ၀က်.. ဆံတော်ရှင်ဘုရားတဆူကို ..၅ပုံတပုံနှုန်းနဲ့..ဆံတော်ရှင်ကြီး ၅ကြီးဆီလှုမယ်ပြောပေါ့..။
တကယ်လည်း.. ကမ္ဘာပျက်ရက်မတိုင်ခင်.. ၂၃၄နာရီအလိုကနေ.. ၂၃နာရီတခါ… အတိအကျခွဲလှူလိုက်ပါ..။ (ဒါက တကယ် နက္ခတ်နဲ့ပြောတာပါ)
ဆေးဖယောင်းတိုင် ၃ထုတ်ရယ်..။ အင်းကွက် ၂၁ခုရယ်..။ ဘီလူးရုပ်..၂ရုပ်ရယ်..။ ၀တ်စုံဖြူဝတ်..အမွေးရှည်ရှည်.. ဘိုးတော်တယောက်ရယ်..။ (ဒါလည်း ..အိပ်မက်အရ.တကယ်ရေးတာပါ)ဘာညာကွိစိကွစိပြောတတ်သူတယောက်ရယ်.. မေတ္တာကြေး.. မေတ္တသုတ် ၂၂ခေါက်ရွတ်ခိုင်းပြီး ..သာသနာအစောင့်ဖြစ်ပါစေ သစ္စာဆိုခိုင်းပြိး ..လိုရာသုံးပေါ့..။( ရှေးဟောင်း ..ပစိက္ကနာတ္တကျမ်းမှာတော့ ..တကယ်ဒီလိုရေးထားပါတယ်..)
သချိုင်းက ..အ၀တ်စတွေနဲ့ နေ့သင့်နာမ်သင့်.. ရက်ရွေးချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့..သင်္ကန်းစပါ.. ယူသုံးလိုက်ရင်တော့ ..(ဒါလည်း .. ဆရာမဟိန္ဒရေးတဲ့.. မခိဝတ္တစေ အင်းမှော်ကျမ်းမှာ ရေးထားပါတယ်..)
အလင်းနှစ် 640 အကွာ က ဆူဗာ နိုဗာ ပေါက်ကွဲမှု ကို ကမ္ဘာပေါ်ကနေ နေ့ချင်းညချင်း မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေး မရှိလှပါ။ မြင်ရမယ်ဆိုရင်လဲ အဲဒီ ဆူပါ နိုဗာဖြစ်စဉ်ဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ခြောက်ရာ့လေးဆယ်ကတည်းက ပေါက်ကွဲနှင့်ခဲ့ပြီးသား ကို မြင်တွေ့ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လည်း သိပ္ပံပညာရှင်များက စင်္ကြာဝဠာ ကိုလေ့လာရခြင်းဟာ အတိတ်ကြေးမုံပြင်ကို ကြည့်ရှုရခြင်း နှင့် တူကြောင်း ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုကြပါတယ်။
အိ… ဘာတွေလဲဟ.. ခုကမ္ဘာပျက်မယ်ပြော.. ခုနေ၂စင်းထွက်မယ်ပြောနဲ့.. မဖြစ်ဖူးလို့မပြောနိုင်သလို.. သေချာပေါက်ဖြစ်မယ်လို့လဲ မပြောနိုင်ပါဘူး..
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်.. ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရင် ဘာမှမထူးဆန်းတော့ပါဘူး.. တကယ်ဖြစ်လာလို့ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုခုဖြစ်ပီဟေ့ဆိုရင်လဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကွက်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ.. အားလုံးဝိုင်းပြီး စဉ်းစား အဖြေထုတ်ကြရမှာပါပဲ…
အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှမသေချာသေးတာကို တွေးမပူတာပဲကောင်းပါတယ်… နတ်ခတ္တာရာပညာရှင်တွေကိုပဲ အလုပ်ပေးထားလိုက် သူတို့ဖာသာတွက်ချက်လိမ့်မယ်….
တကယ်ကိုသေချာပီ.. ဖြစ်လာတော့မယ်.. အတိအကျသိရပြီဆိုတော့မှ.. လုပ်သင့်တာလုပ်ကြတာပေါ့…
အင်း.. ဆြာခိုင်က မယုံဘူးဆိုပေမဲ့ ရွာသားများအကျိုးရှေးရှုပြီး ပြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲ။ ရွာသူရွာသားများ သက်ကယ်ရွက်တွေရှာပြီး စတိသဘောဖြစ်ဖြစ် အိမ်ခေါင်မိုးမှာ မိုးထားတင်ထားကြပါ။ အိပ်ကပ်၊ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲမှာလည်း ရွာလွတ်ကထွက်တဲ့ ဆေးတံ၊ဆေးဗူး စတာတွေ ဆောင်းထားကြပါ။ ၂၀၁၂ခုနှစ်ဆိုတာ ဘာမှမဝေးတော့ပါဘူး။ မယုံဘူးဆိုတဲ့ အာခံချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတခုအတွက်နဲ့ ဒုလ္လဘရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝကို မဆုံးရှုံးမိပါစေနဲ့။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်းအင်္သချေရှိပါပြီ။ အင်္သချေဆိုတာကို ကိန်းဂဏန်းဖွဲ့မရလို့ နှစ်သန်းကုဋေကဋာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် ကြာတယ်လို့ အလွယ်မှတ်ပါ။ အဲသည်လောက်ကြာအောင် လူတွေရှင်သန်နိုင်တာ၊ ကပ်ဘေးအန္တရယ်တွေကနေ လွန်မြောက်လာတာ နားလည်ရန်ခက်တဲ့ စွမ်းအင်သတ္တိ အစီအရင်တွေကြောင့်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး ကျေးဇူးရှင် ဆရာသခင်များရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို လေးလေးစားစားနာယူကြပါစို့။
သတိ။ ရုပ်ဝတ္ထုဆရာများ ကြွားဝါလေ့ရှိတဲ့ အင်တာနက်၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ပလပ်ဖြုတ်ထား၊ ဘက်ထရီအားကုန်ရင် အလကားပါ။ ဒုံးပျံ၊ အာကာသယာဉ် ဘယ်လောက်စွမ်းစွမ်း မူလီတလုံးပြုတ်နေရင် ဝုန်းဆိုပေါက်ကွဲပျက်ဆီးပါတယ်။ ညူကလီးယားစက်ရုံ၊ အသံထက် မြန်လေယာဉ်၊ ရထား ဘယ်လောက်ထွင်ထွင် တချက်သတိလွတ်ရင် ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပါကြောင်း မေတ္တာရှေ့ထား အသိပေးလိုက်ပါသည်။ ဤစာကို အသိဆယ်ယောက်အား ဖြန့်ဝေပါ။ ဘေးမှဆယ်ခါလွတ်မည်။ ပိုဖြန့်လေ ပိုလွတ်လေဖြစ်မည်။
သတ္တအားလုံးအေးချမ်းစေရန် မယုံကြည်သူများကိုလည်း အဘမှာသည့်အတိုင်း မေတ္တာပို့ပါသည်။
Would be ဘိုးတော်ကြောင်ကြီး
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုး)ပြောသလို တို့ ကတော့အဆင်သင့်ပဲဟေ့….
ဟိုကွေ့ရောက်လျှင် ဟိုတက်နဲ့လှော် ၊ ဒီကွေ့ရောက်လျှင် ဒီတက်နဲ့လှော်ပေါ့..။ တွေးပူနေတာ ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်…။